Imfazwe ebandayo ye-SC War Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack-Gamepron
SC Ifowuni yeDuty Ops emnyama: Imfazwe ebandayo
Umlo obandayo ungasondela njengesigebenga sokwenyani sisebenzisa i-SC!
Lixesha elihle lokuba uqalise ngenkqubo yokuqhekeza, kutheni ulinde nje? Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Ukufumana okona kubambana kweMfazwe ebandayo ekhoyo kwi-Intanethi apha GamePron. Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje!
Ngaba ujonge ukukhusela ukufikelela kude kube ngaphezu kweveki? Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Umlo obandayo yenye yezona zinto zithandwayo kukhutshwa uxanduva lomsebenzi esakha sabona, kwaye kwaba sengqiqweni ukuphuhlisa i-SC Cold War Hack yethu yokutshatisa ne-hype. Ukufikelela ekukhohliseni okuza kutshintsha umhlaba wakho!
Umnxeba we-Duty Black Ops: Imfazwe ebandayo ye-SC yoLwazi
La maxesha omele uwaxabise njengomdlali onokukhuphisana naye kwiCall of Duty, njengoko ngoku kukho isixhobo esinokukunceda ukuba unyukele phezulu ngaphandle kwemibuzo ebuziweyo. Unokumisela isiphumo sematshisi ngokwakho xa une-Cold War SC yeHack Hack enikwe amandla, kwaye loo nto bubungqina bokuba singasibamba kangakanani esi sixhobo. Ezandleni ze-hacker enamava, bambalwa kakhulu abantu abasemhlabeni abanokuma kumandla akho! Ukuba ufuna ukuba ngumtshintshi womdlalo iqela lakho belijonge lonke eli xesha, esi sixhobo sinokukunceda.
Ukukopela kwezona zilungileyo kuzo ngokusebenzisa iMfazwe ebandayo i-ESP ukubona zombini iintshaba kunye nabadlali abanobuhlobo. Ungawubona umgama wotshaba kwaye usebenzise iitshekhi ezibonakalayo ukuze ugcine injongo yakho "ingenasikrokro". I-Aimbot ibonelela ngesangqa se-FOV kwaye ijolise egudileyo, kunye nokubekwa phambili kwethambo kunye nezinye izinto ezimangalisayo!
Iindlela ezahlukeneyo zoJoliso
Akukho moduli yokubuyela umva
Imibala ye-esp enemibala yeeThambo kunye ne-FOV
I-ESP ivuliwe / icinyiwe
Malunga neMfazwe ebandayo i-SC
Esi sixhobo sinika "iTriggerbot", eya kuthi ngokuzenzekelayo ikhuphe nabaphikisi abakhoyo beme phambi kwakho. I-No Recoil Mod iyamangalisa kwabo bafuna ukudubula ngqo, kodwa abafuni kuxhomekeka kwi-aimbot okwangoku. Sikwadibanise neMody Delay Mod, kunye nephalethi ye-ESP enemibala. Ukukopela kulula kakhulu ukusebenzisa, kwaye kuya kubaxhasa abasebenzisi bethu ngazo zonke iindlela ezilungileyo. Ungadlala kwiscreen esigcweleyo ngelixa usebenzisa le cheat, nangona kuyacetyiswa ukuba ungazami ukuyisebenzisa kwimowudi yewindows!
Kutheni usebenzisa iMfazwe ebandayo SC kunabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli abayi kukhathalela ngawe njengoko sisenza apha kwiGamePron, kwaye yile nto yenza izixhobo zethu zibe lolona khetho lufanelekileyo. Ngokuqinisekileyo, unokuthembela kumboneleli osweleyo ukuba abethe kunye nenye i-junk Call of Duty hack ngeqhezu lexabiso, kodwa iziphumo ziya kuzithetha ngokwazo. Xa ufuna ukuqhekeza ngokufanelekileyo kwaye ngaphandle kokukhathazeka, ukusebenzisa iMfazwe ebandayo i-SC yeyona ndlela ekuphela kwayo enokwenza ngayo. Ngaba uzenzele inceba kwaye usebenze kunye nomnikezeli othembekileyo othembekileyo kwi-Intanethi! Sigcina i-Cold War SC yethu ihlaziywa rhoqo ukuze kuqinisekiswe ukuba abasebenzisi bafumana olona lwazi lubalaseleyo.
Ngokuqinisekileyo elona candelo libaluleke kakhulu kuyo nayiphi na into enokubakho kwimenyu yomdlalo. Iimpawu ezibandakanyiweyo ngaphakathi zibalulekile, kodwa ukuba awukwazi ukuzilungelelanisa ukuze zilungele iimfuno zakho, i-hack inokuthi ithathwe njenge- "engenamsebenzi" ngengqondo. Awufuni ukuqhekeza ngokwezakhelo zomboneleli wakho, ngakumbi xa uzama ukuqhekeza kuseto lobuchwephesha- ngemenyu yethu yomdlalo, akukho ndlela inye engenakulungiswa! Yenza umdlalo wakho kangangoko ufuna usebenzisa yethu Cold War SC kugula! Ukuba ulungele ukwenza utshintsho, jonga izixhobo ezivela kwi-GamePron.
A2. Hayi, ubuqhetseba abukho ubungqina bokuhamba.
A4. Ewe, le mveliso inokusetyenziswa kuphela kwimowudi epheleleyo yesikrini. Sukuyisebenzisa kwezinye iindlela zewindow.
A5. Le mveliso isebenza kwiMultiplayer kunye neZombi. HAYI WARZONE.
Nokuba udiniwe kukuthembela kwiirandi ukukunceda uphume, okanye ufuna nje ukubona ukuba kunjani "kwelinye icala", ukusebenzisa iCold War SC Cheat iya kukunceda uphumelele ngeendlela ezininzi kunenye.
Ilindelwe Lawula kunye yethu COD BO SC kugula?